ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်လိုက်ရှာ? Manspreading အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက် Be နိုင် - သတင်း Rule
ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်လိုက်ရှာ? Manspreading အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက် Be နိုင်
ဗီဒီယိုများနှင့်တစ်ဦး Tinder စတိုင် app ကိုအသုံးပြုခြင်း, သုတေသီများသူတို့ကိုယ်သူတို့ဆနျ့သူတွေကိုအလားအလာမိတ်ဖက်များကပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု rated ခဲ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှာဖွေနေ? Manspreading အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်နိုင်, လေ့လာမှုအကြံပြု” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, တနင်္လာနေ့ 28 မတ်လအပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2016 19.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ပတ်ဝန်းကျင်စကားလက်ဆုံစိတ်ထဲဘယ်တော့မှမ, စင်ကြယ်သောအနံ့နှင့်လူတစ်ဦး၏နာမကိုသတိရ. ခေတ်သစ်ချိန်းတွေ့၏ကမ္ဘာ့အ, အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အာကာသကိုတက်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေဘို့ပုံမှန်မဟုတ်သောအစွန်အဖျား, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ဦးကိုနှစ်သက်, မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများသုံးတဲ့သူအသုတေသီများနှင့်တစ်ဦးကိုအမေရိကန်ကနေကြွလာ Tinder စတိုင် app ကို သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဆန့ ်. လာသောအခါလူကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအဖြစ် rated ခဲ့ကြကြောင်းကိုပြသ.
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ထည်တိုးချဲ့သူတွေကို, သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုထုတ်တွန်းများနှင့်ကျယ်ပြန့်သူတို့ရဲ့လက်နက်ပြန့်နှံ့အခြားသူများထက်ပိုပြီးရင်ခုန်စရာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူဆုခခဲ့ကြ, ဖြစ်နိုင်ကိုယ်ဟန်အနေအထားပွင့်လင်းခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးဆိုလိုသောကြောင့်,, သုတေသီဆို.
မတူတာကတော့, မိမိတို့ကိုယ်ကိုတက်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့သောသူတို့အား, နှင့်၎င်းတို့၏လက်နက်နှင့်ခြေထောက်များကိုကူး, အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်ကျော်အနိုင်ရသူတို့ရဲ့လေလံအတွက်ညံ့ဖျင်းအခြေအနေကော.
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အဘယ်သူ Singleton ၏ရမှတ်များကကူညီနိုင်, Tinder နှင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကာလ၌, သူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေးတမန်တော်အမှန်ကိုယ်စားပြုမယ်လို့သောဧရာမဆုလာဘ်သိရှိစေရန်တစ်ခုသာဓါတ်ပုံများ၏လက်တဆုပ်စာနှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်ရှိ.
ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေတဲ့အစီရင်ခံစာအတွက် သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု, ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှတန်ယာ Vacharkulksemsuk, ဘာကလေ, သူမ၏အဖွဲ့သည် ပို. "တိုးချဲ့" ကိုယ်ဟန်အနေအထားမွေးစားသောသူနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုပိုမိုမိတ်ဖက်တစ်ဦးမှာအောက်ပါအတိုင်း-up ကရက်စွဲကိုတောင်းဆိုခဲ့ပုံကိုပြသနေတဲ့မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့အဖြစ်အပျက်ကနေဗီဒီယိုရိုက်ကူးအသုံးပြုဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်.
သူမသည်တစ်ဦး Tinder စတိုင် app ကိုအပေါ်စမ်းသပ်ချက်နှင့်အတူတက်နောက်တော်သို့လိုက်. လူသုံးယောက်နှင့်အမျိုးသမီးသုံးဦးသည်သူတို့အဘို့အနေသူများကဖန်တီးနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့ profile များကိုရှိသည်ဖို့သဘောတူညီခဲ့. တစျခုပွင့်လင်း pose မှာသူတို့ကိုပြသ, ထိုကဲ့သို့သောန့ခြေထောက်နှင့်အတူပြန်လည်မြှောင်အဖြစ်, သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သူတို့ရဲ့လက်နက်နှင့်အတူထွက်တက်ရပ်နေ. သည်အခြားပရိုဖိုင်းခုနှစ်တွင်, သူတို့က "စာချုပ်" pose မွေးစား, ဥပမာအားဖြင့်, တက် hunching အားဖြင့်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လက်နက်ခေါက်နဲ့သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုဖြတ်ကူး.
Vacharkulksemsuk နှစ်ဦးတနင်္ဂနွေကိုကျော် profile များကိုအပ်လုဒ်တင်အရှိဆုံးရင်ခုန်စရာအကျိုးစီးပွားဆွဲငင်သောမှတျတမျးတငျထား. ခန့်မှန်းသည့်အတိုင်း, ပိုမိုပွင့်လင်းကိုယ်ဟန်အနေအထားအထိတွေ့ဆုံရန်တောင်းဆိုမှုများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကောင်းဆုံးအခြေအနေကော. တစျဖနျ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအကြိုးခံစားခဲ့ရ, အကျိုးသက်ရောက်မှုလူပိုကြီးခဲ့ပေမယ့်.
ဂျာနယ်ထဲမှာရေးသားခြင်း, သုတေသီ "ကြီးစိုးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဓာတ်ပုံများအတွက်လက်နက်နှင့်ခြေထောက်၏ splaying မခေါ်, သုညအသိအကျွမ်းမှာ Non-နှုတ် display တွေဖွင့်လှစ်။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတစ်ကယ့်မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့အဖြစ်အပျက်မှာတစ်ခုတည်းပုဂ္ဂိုလ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှစပါးကိုရိတ်, နှင့်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ application ကို အသုံးပြု., ဒါကြောင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားချဲ့ထွင်သိသိသာသာအောင်မြင်သောကနဦးရင်ခုန်စရာ connection ကိုအောင်၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုထင်ရှား၏,"သူတို့ add.
အခြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာရေးလူသားမြားသဒါကွဲပြားခြားနားသောမဖွစျစခွေငျးငှါအကြံပြု. Vacharkulksemsuk တိရိစ္ဆာန်များသူတို့၏နောက်ကွယ်မှနှင့်လိင်အင်္ဂါကိုဘှားမွငျသောပြသမှုဖော်ပြထား. အထီး Gorilla ကန်နှင့်ဘေးတိုက်ပြေးနေဖြင့်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ flaunt, ဒေါင်းသူတို့ရဲ့အမြီးအတောင်တော်အမွေးပြသနေသဖြင့် peahens ဆွဲဆောင်စဉ်.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အချို့ကိုပုံစံကိုတဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံတဲ့မိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေ၏ဒုတိယအသုံးအများဆုံးလမ်းဖြစ်လာသည်, မိတ်ဆွေများမှတဆင့်အစည်းအဝေးပြီးနောက်. နီးပါး 91m ကလူမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေစမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြု, အကွောငျး 70% သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာဘယ်သူကို၏ 16 သို့ 34, စာရေးသူရေးဖို့.
"ဒီလိုပလက်ဖောင်းတွင်, အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူရက်စွဲတစ်ခုရတဲ့သာမန်တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်သို့မဟုတ်အကျဉ်းအပြန်အလှန်ဖြင့်အစပြုဘယ်မှာ, ထိုကဲ့သို့သောအနည်းဆုံးအချိန်ဘောင်အတွင်းတယောက်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်အကျိုးရှိသည်,"သူတို့ add.
26571	4 အပိုဒ်, ချိန်းတွေ့, မှ Ian နမူနာ, အဓိကအပိုင်း, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့, စိတ္ပညာ, ဆက်ဆံရေး, သိပ္ပံ, အုပ်ထိန်းသူ, Tinder, ဗြိတိန်သတင်း
← Virtual Reality Porn လာသည် Dyson ဟာသန့်စင်သော Cool Link ကိုလေတပ်သန့်လွှတ်တင် →